Moussaka yaBaqalayo | Ukupheka kweKhitshi
UHana mitchell | | idelicatessen, Ukupheka kwenyama, Iiresiphi ezilula
Bangaphi kuni abakhe badla naziphi na izitya ezimangalisayo gastronomy yesiGrike? Kwaye bangaphi kuni abaye bazama ukuzisa ihashe leTrojan ekhaya? Ngokuqinisekileyo bambalwa ... bambalwa kakhulu ... kwaye kulihlazo. Kungenxa yoko le nto kudala ndifuna ukwabelana nawe ngolonwabo lwamaGrike njengolu ixesha elide. UMoussaka wabaqalayo (Ifana ne-lasagna kodwa endaweni yokuba ineeplate zepasta ine-aubergine).
Ndikwenza kube lula kakhulu kuwe ukukhuthaza ukuba ucebise incwadi yakho yokupheka. Sele undixelele ukuba ucinga ntoni!
Ukuba awukabinalo ixesha lakho lokuqala kunye ne-Greek gastronomy, ndincoma ukuba utsibe echibini ngale recipe elula kakhulu yeMoussaka yabaqalayo. Imnandi!
½ kg yenkomo / yemvana ecoliweyo
I-1 kg ye-aubergines (ayilahlekile)
Itoti enye enkulu yetamati exutywe
Izikhongozelo ezi-2 ze-bechamel elungisiweyo
Ityuwa kunye nepepile ukungcamla)
¼ iglasi yewayini emhlophe
itshizi egreyithiweyo (nantoni na oyifunayo) Ha
Njengoko uyazi, kwi-moussaka sithatha indawo yezikwere ze-pasta ze-aubergines, ke siza kuqala ngazo. Sinqumle kwisiqwenga se-cm-cm kwaye sibeke kwisitya esidibeneyo. Songeza ityuwa eninzi ngaphezulu ukuze bakhuphe amanzi (siyivumela ukuba iphumle kangangesiqingatha seyure okanye ngaphezulu).
Xa ixesha lidlulile, sihlamba iincindi ze-aubergine ukususa ityuwa egqithileyo kwaye somile ngephepha lekhitshi. Kwipani yokutshiza songeza ioyile ye-olive ngobuninzi kwaye siqhotse ii-aubergines zide zibe mnyama ngombala. Siyeke ukuba "zome" kwakhona kwiphepha lokufunxa. Sabhukisha.
Sisika i-anyanisi e-2 kunye nedinethi ye-garlic ngokucocekileyo njengoko sinokufumana. Ixesha lenyama kwaye ubeke isithako ngasinye kwisitya.
Esipokeni, yongeza amacephe amathathu eoyile kwaye wongeze itswele kunye negalikhi. Vumela ukubola kwaye wakugweba, yongeza inyama yegusha (okanye inyama yenkomo). Sifaka i-mint, i-parsley eqoshiwe kunye nepunipoon ye-cannel. Mayiqhekeze imizuzu emi-3 kubushushu obuphantsi, ngaphandle kokuyeka ukuvusa. Yongeza iitamatisi ezixobukile kunye neglasi yeewayini emhlophe. Vumela ukunciphisa (imizuzu eli-5-15).
Sitshisa i-oven malunga ne-180ºC
Siqala ngendibano: Siprinta amazantsi omthombo ngebrashi kunye neoyile eseleyo kwii-aubergines. Sibeka uluhlu lwee-aubergines. Phezulu umaleko womxube kunye nenyama, elandelayo nge-béchamel kwaye uphinde uphinde de sibe nemigangatho emi-2. Okokugqibela sigqiba ngothotho lokugqibela lwe-bechamel eninzi kunye netshizi egreyithiweyo.
Sifaka kwi-ovini imizuzu engama-25 ngo-180º kunye nemizuzu emi-5 ngemowudi yegratin.
Iikhalori: I-120 x 100 gr
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Abahlobo » idelicatessen » UMoussaka wabaqalayo
Amabele amnyama enkukhu egalikhi